Decoora Actualidad ब्लग को एक वेबसाइट हो। हाम्रो वेबसाइट समर्पित छ सजावट को दुनिया, र यसमा हामी तपाईंको घर, बगैंचा, कार्यालयको लागि मौलिक विचारहरू प्रस्ताव गर्दछौं ... जबकि हामी यस क्षेत्रको चलन र विकासको बारेमा कुरा गर्दछौं।
El Decoora सम्पादकीय टीम सजावट को संसार को प्रशंसकहरु बाट बनेको छ जो आफ्नो अनुभव र कौशल साझा को लागी खुशी छन्। यदि तपाईं पनि यसको अंश बन्न चाहनुहुन्छ भने, नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई यो फारम मार्फत लेख्नुहोस्.
यद्यपि मैले मेरा अध्ययनहरू औद्योगिक क्षेत्र र ईन्जिनियरि towardsको लागि निर्देशित गरें, तर त्यहाँ अन्य धेरै कुराहरू छन् जुन मलाई भर्दछन्, जस्तै संगीत, आन्तरिक डिजाइन वा खाना पकाउन। डेकुराले मलाई तपाईं सबै सुझावहरू, विचारहरू र सजावटको बारेमा DIYS को साथ साझेदारी गर्ने अवसर दिन्छ।
म सानो भएकोले मैले कुनै घरको सजावट हेरे। बिस्तारै, आन्तरिक डिजाइनको संसारले मलाई आकर्षित गर्न जारी राख्यो। म मेरो रचनात्मकता र मानसिक क्रम व्यक्त गर्न मनपराउँदछ ताकि मेरो घर सँधै उत्तम होस् ... र यसलाई प्राप्त गर्न अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्!
म सँधै स्पष्ट थियो कि मेरो कुरा शिक्षक हुनु पर्छ। यसैले, म अंग्रेजी फिलोलजी मा एक डिग्री छ। तर पेशाको साथसाथै, मेरो जुनसाहरू मध्ये एक सजावट, अर्डर र सजावटी शिल्पको दुनिया हो। जहाँ रचनात्मकता सधैं धेरै उपस्थित हुनुपर्दछ र त्यो एउटा चुनौती हो जुन मलाई मनपर्दछ।
विज्ञापनमा डिग्री संग, मलाई के मन पर्छ सबैभन्दा बढी लेख्नु नै। थप रूपमा, म सबै चीजसँग आकर्षित छु जुन सौन्दर्य रूपमा मनमोहक र सुन्दर छ, त्यसैले म सजावटको प्रशंसक हुँ। मलाई एन्टिक र नॉर्डिक, भिन्टेज र अन्य औद्योगिक शैलीहरू मन पर्छ। म प्रेरणा खोज्छु र सजावटी विचारहरू प्रदान गर्दछु।
म हालै एजेन्ट र उच्च अन्त फर्नीचरको आयातकर्ता हुँ, मुख्यतया नॉर्डिक, खुद्रा क्षेत्रको १० बर्षको अनुभव पछि, पहिलो म्याड्रिडको डिजाइन र सजावटको शोरूमहरुमा स्टोर म्यानेजरको रूपमा, र पछि एक आन्तरिक डिजाइनर र निर्दिष्टकर्ताको रूपमा आर्किटेक्चर स्टूडियो। मैले सँधै स्कान्डिनेभियाली डिजाइनको idiosyncrasies को साथ पहिचान गरेको छु: आवश्यक, कार्यात्मक, कालातीत, रंगीन र कलाविहीन रहित।
हिस्पैनिक फिलोलोजीमा स्नातक, अक्षरहरू र सबै चीज सौंदर्यको रूपमा सुन्दरको बारेमा भावुक। मेरो मनपर्ने खेल: आन्तरिक सजावट र डिजाइन वस्तुहरूको दुनियासँग सम्बन्धित सबै कुराको बारेमा मेरा प्रभावहरू बताउँदै। आशा छ तपाईंले मेरो सामग्रीको आनन्द लिनुभयो।